Waqooyiga Kuuriya oo sheegay in ay tijaabiyeen gantaalkoodii shanaad oo nukleer ah oo lagu guulaystay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWaqooyiga Kuuriya oo sheegay in ay tijaabiyeen gantaalkoodii shanaad oo nukleer ah oo lagu guulaystay
September 9, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabiyay gantaalkoodii shanaad oo Nukleer ah tan iyo sanadkii 2006.
Pyongyang-(Puntland Mirror) Dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in ay tijaabiyeen “Gantaal Nukleer ah oo lagu guulaystay” si ay uga hortagaan waxay ugu yeereen cadaawada Maraykanka, taleefishinka dowlada Waqooyiga Kuuriya ayaa ku waramay, tasoo ka xanaajisay dariskooda iyo Maraykanka.
Dhul gariir lagu qiyaasay cabirkiisa 5:3 ayaa gilgilay waqooyiga dalka Waqooyiga Kuuriya subaxnimadii saakay oo Jimce ahayd, sida ay sheegtay haayada saadaasha hawada ee Koonfurta Kuuriya, kaasoo ahaa dhul-gariirkii ugu weynaa oo ka dhasha tijaabo gantaal.
“Guddiga Dhexe ee talada haya ee xisbiga shaqaalaha Kuuriya wuxuu hambalyo u diray cilmiyahanada nukleerka……ee tijaabadii gantaalka nukleerka ahaa ee lagu guulaystay,” soo jeediyaha taleefishinka ayaa sidaa yiri.
Tilaabadaan ayaa ka xanaajisay wadamada dariska la ah Waqooyiga Kuuriya sida Koonfurta Kuuriya iyo Japan iyo dalka kale oo ay cadaawada isku qabaan ee Maraykanka.
Bartamihii bishii Janaayo ee sanadkan, dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabiyay gantaalkoodii afraad.
Qaramada Midoobay ayaa ka mamnuucday Waqooyiga Kuuriya tijaabada gantaalada Nukleerka ah balse waxay tijaabisay keedii shanaad tan iyo sanadkii 2006 oo ay QM cunaqabataynta kusoo rogtay.
July 26, 2016 19 qof oo lagu dilay weerar mindi oo ka dhacay dalka Japan
Garoowe-(Puntland Mirror) Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay roobab mahiigaan oo wata dabaylo oo 24-kii saac ee la soo dhaafay ka da’ayay deegaanada Puntland gaar ahaan xeebaha. Gobolka Gaardafuu, hal qof ayaa ku dhintay kadib [...]